Hagaha loogu talagalay safarrada safarka ee North East India Wac lambarka + 91-993.702.7574
Dalalka ugu yar ee sahlan, sahan ee waqooyi-bari waa wax aan la ogeyn oo ah meel qarsoodi ah oo soo booqda. Runtii waa samada aan la ogaan! Nidaamyada safarrada Waqooyi Bariga Hindiya ayaa si khaas ah loogu talagalay inaad sahamiso dhulkan qarsoodi ah.
Buundada dusheeda iyo dooxooyinka guursanaya ee Himalayas, Waqooyi Bari Hindiya waa ugu yaraan baadhitaan ku samaysay, adduunka kale iyo goob joog ah oo ka mid ah meelaha ugu fiican India. Qeybtan qaranku waxay hoy u tahay 'Seven Sisters' Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland iyo Tripura. Muuqaal kale oo aan macquul ahayn ee bariga sare waa Sikkim. Gangtok cajiib ah wuxuu soo jiitaa qiyaaso badan oo socdaalayaasha sanadka oo dhan waana mid aan loo baahnayn oo booqasho ku yimaada marxalad kasta hal mar noloshaada.
Isku xirnaanshaha Hindiya iyada oo loo marayo dalxiis dhaadheer oo dhul ah, muuqaalkan hudheelka ah ee quruxda badan leh iyo Budistayaasha Buddhist ayaa si deg deg ah u qaata khibradda Hindiya iyo sidoo kale martida ajaanibta.
Dhaqan ahaan iyo joqoraafi ahaan, Waqooyi Barri Hindiya way kala duwan yihiin dalka intiisa kale waana isku mid muuqda qaab nololeedka dalka. Dareeraha buuraha Blue, neefta neefta, cawska cufan, xayawaanka duurjoogta ah, dhaqanka noolaha iyo farsamada gacanta ayaa kugula tagi doona xusuuso aan la ilaawi karin.
Qaar ka mid ah meelihii aad qorsheyn kartid safarkaaga waa Darjeeling, Kalimpong, Gangtok, Lachung, Kanchenjunga Peak, Dooxada Yumthang, Shillong, Pelling, Cherrapunjee, Park National Park, Guwahati iwm. Ka hubi qaar ka mid ah Nidaamyada Safarrada Waqooyi ee Hindiya Hindiya ee hoos ku xusan kuna qorshee safarkaaga!
Qabaa'ilka Arunachal Pradesh
Xarumaha Hill ee Waqooyi Bari ee Hindiya